Edit YouTube Faylal ay la Video Editors kala duwan YouTube
Inta badan videos uploaded in YouTube waa la sameeyo amateurs aniga iyo adiga oo kale, sida caadiga ah iyada oo qalab video qaadashada suubban. Sidaas awgeed waxa la yaab ma leh in aad ka heli lahaa wax badan oo videos ka dhiman oo tayo leh oo ka kooban. Haddii aad jeclaan lahayd in aad isbedelo si aad YouTube videos, qodobkan kugu habboon. Halkan waxa aad baran doontaa sida loo edit files YouTube la isticmaalayo qalab kala duwan.
Qeybta 1: Edit YouTube Videos la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Qeybta 2: Edit YouTube Videos la YouTube Video Editor
1. Waxaad diiwaan runtii xiiso leh a video oo aad rabto inaad la wadaagto saaxiibo on YouTube, laakiin waxay u baahan yihiin in meesha laga saaro goobta gaar ah, dalagga geesaha madow, ku dar subtitles ama wax cunaan jajabka kale ee hore. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) - xirfadle ah oo kasoo muuqdo hodan tafatirka si weyn lagu talinayaa qalab.
2. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah goobta gaar ah ee video ah run ahaantii aad dhibaya oo aad rabto in aad ka soo qaado, ama aad h aaro ah rabitaan iyo xamaasad ku darto saamaynta video ka badan sida PIP, Toos off, Jump gooyaa oo dheeraad ah. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) gelineya inaad si fudud aad u hagaajisid video ku qasabno yar.
Raac hoos ku tusmo xaalkaa files YouTube si hufan. Haddii aad tahay user Mac ah, u leexdo xagga Mac Video Editor caawimaad.
Tallaabada 1. files Import YouTube in editor video ah
Ku rakib iyo abuurtaan editor video ah, ka dibna riix "Import" ama jiidayo ee YouTube videos aad rabto in aad wax ka bedel barnaamijka. Dhammaan files ee la soo bandhigi doonaa in User ee Album. Waxaad kala sooci karto faylasha magac, duration ama nooc. Marka aad previewing faylasha, waxaad qaadan kartaa snapshots ah goobaha aad jeceshahay si xor ah.
Tallaabada 2. goo ama kala qaybsan YouTube videos
Tallaabada 3. Ku biir YouTube videos
Jiid ah YouTube files daray ka album in Jadwalka ay ka mid hooseysa oo ay ka mid. Fiiro gaar ah in aad leedahay si ay u diyaarin in Timeline sida waafaqsan nidaamka play ah. Hana jiidi mid file in file kale, ama aad u kala qaybsan tahay doonaa. Si fiican kuu diyaarin dhowr files YouTube aan is dul saaran, waxaad isticmaali kartaa bar slider ay u guuraan files. Marka aad dhamayso shaqada, riix badhanka Play ee suuqa kala xiisaha leh ee ay u arkaan saameynta waqtiga dhabta ah.
Tallaabada 4. Dalag YouTube videos
Tallaabada 5. Ku dar saamaynta badan si ay u YouTube videos
Waxa kale oo aad codsan kartaa saamaynta video aad YouTube video files. Just tagaan si ay isha ku kala duwan ku xusan waqtiga iyo dooran saamaynta aad rabto in aad ku darto. Noocyo kala duwan oo saamayn tafatir sida guurka, Intro / credit, humaag, wareeg ah usii, ka horimaanaya, bood jaray at garaaca waxaa la siiyaa.
Tallaabada 6. Share saxar YouTube video
Ka dib markii tafatirka, guji "Abuur" oo xulo "YouTube", markaas talooyin aad xisaabta iyo password si aad u wadaagi kartaa video saxar on YouTube si fudud. Waxa kale oo aad ku badbaadin karto videos qaab video aad jeceshahay ama aad u hesho filaayo in videos for aad iPhone, iPad, iPod, PSP, Wii, iwm Intaa waxaa dheer, in aad DVD cajalladaha gubi kara videos for better video ilaalinta.
Video Tutorial: Sida loo Edit YouTube Videos
1. Haddii aad xiisaynayso Iyada iyo xoojinta YouTube kuu gaar ah videos, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho editor video ah. Inkasta oo ay jiraan codsiyo badan oo standalone fiican halkaas, qalab online waxtar leh sida YouTube Video Editor had iyo jeer ka dhigaysa shaqada la sahlo.
2. Raadi boqolaal Creative Commons videos iyo kuwan raadkaygay audio in ay yihiin copyright free on YouTube iyo doonayso inaad ku isticmaasho si ay u abuuraan video cusub? U bood badan u YouTube Video Editor in ay ka faa'iideystaan ​​khayraadka haatan.
Si aad u ogaatid sida loo edit YouTube video la YouTube Video Editor, fadlan hubi hagaha wixii faahfaahin dheeraad ah >>
> Resource > YouTube > Sida loo Edit YouTube Faylal ay la Video Editors kala duwan YouTube